“Misy fahalalàn-drazana ao amin’ny vondrom-piarahamonina tompotany ao Sarayaku” · Global Voices teny Malagasy
MpanoratraWiliam San Nicolás
Voadika ny 03 Jona 2018 5:15 GMT
Wiliam San Nicolás dia mpikambana ao amin'ny Vahoaka Kichwa avy ao Sarayaku miorina ao amin'ny faritra amazoniana ao Ekoadaoro, ary nanao tolona lavitr'ezaka maro teo amin'ny sehatry ny firenena sy iraisampirenena hampitsaharana ireo tetikasam-pitrandrahana ao amin'ny zaratanin-dry zareo. Ity manaraka ity dia dika an-tsoratra tamin'ny fanehoan-kevitr'i William tamin'ny lahatsary amin'ny ny zavon-teny manondro ny voambolana “Sarayaku“. Ao anatin'ny zavonteny, ny tsy fisian'ny voambolana “educación” (fanabeazana) no nahasarika ny fifantohan'i Wiliam.
Teny manjaka ao anatin'ny lahatsoratra miisa 97 nivoaka teo anelanelan'ny Janoary 2017 sy Avrily 2018 manonona “Sarayaku” ao anatin'ny angona Media Cloud telo ao amin'ireo seha-mpampitam-baovao miteny espaniola ao Ekoadaoro. (raha hijery sary lehibe kokoa)
Ao anatin'ny andiany Rising Frames narafitra ho ao amin'ny atrikasa nokarakarain'ny Departemantan'ny Fifandraisana ao Sarayaku tamin'ny 17 Mey 2018 izay nitondra ho ao amin'ny toerana iray ireo mpikambana tanora ao amin'ny vondrom-piarahamonina handinihana ny fomba isehoan-dry zareo na ny lohahevitra tandrovin-dry zareo ao amin'ny angona media Ekoadaoreana ary hamorona tantara ho setrin'izany fisehoana izany. Efa nandray anjara tamin'ny tetikasa Reframed Stories i José Santí, iray amin'ny mpandrindra ny atrikasa ary nanoratra ny fitantarany manokana [mg] momba ny fisoloantena an'i Sarayaku.
Karaiba 16 ora izay